Soosaarka dalagga | February 2020
Uurka iyo ariga lambarka: dayactirka iyo daryeelka
Aconite - warshad dilka ah ee geedaha ah ee cufanada jilicsan, oo leh toosan afkoda. Waxa uu leeyahay qaab aan caadi aheyn oo ubax ah, badanaa midab buluug ah, waxaa jira caddaan iyo jaalle. Bloody Aconite ee July, waxay ubaxyada waxay u eg yihiin ubax lupine. Ku dhowaad dhammaan noocyada aconite waa sun. Aconitum Exelia (Aconitum exelsum) Aconite sare ee deegaanka dabiiciga ah wuxuu ku badan yahay kaymaha Ruushka, koonfurta Siberia iyo meelaha buuraha ee Central Asia.
Cumin: beeritaanka, daryeelka, taranta
Xayeysiis kasta waa ogyahay in shumaca uu yahay lafis aan loo baahnayn. Haysashada ur aan caadi aheyn oo dhadhankeedu, waxay u fiican tahay suxuunta hilibka iyo suugada. Thanks to maqaalkeena waxaad ogaan doontaa sida aad u kori lahayd macdanta dalkaaga oo aad u isticmaasho sanad dhan. Ma taqaanaa? Shaahda caraway waxay hagaajisaa rabitaanka cuntada, niyadda iyo dheef-shiidka, waxay hagaajinaysaa guud ahaan habka jirka iyo waxqabadka.
Guryaha dawooyinka ee tincture aconite
Aconite ee dabiiciga ah ma aha mid aad u caan ah, meelaha qaarkood iyo dhammaan qiyaasta burbur, laakiin gurigeeda dawooyinka ayaa muddo dheer la qiimeeyay. Daawada dadweynaha, sifooyinka geedka waxaa loo isticmaalaa kiisas badan, mararka qaarkood rajo la'aan, laakiin sababta oo ah suntan, badanaa waxay ka baqayaan inay isticmaalaan aconite daaweynta.
Saliid caro ah iyo hanti
Pear Prickly - a warshad dilka ah ee qoyska cacti, sii kordhaya ee Steppes of America America, Argentina, Canada. Waxaa sidoo kale lagu beeray Caucasus, dalka Turkiga, ee Crimean. Laga soo bilaabo pear prickle (caktus flat) by habka qabow-cadaadinta abuur ah hesho saliid ugu qiimaha badan, muddo dheer loo isticmaalo cosmetology iyo daawada.
Anemone: Isticmaal, sifooyin daaweyn iyo ka horjeeda
Warshadu waxay heshay sumcaddeedii qarniyo badan ka hor sababtoo ah quruxdeeda iyo qallafsanaan la'aan. Qiyaastii boqol iyo konton cayn oo ah qiyaasta anemone (anemone) ayaa hadda la yaqaan. Qiyaasahoodu way kala duwan yihiin 10 cm ilaa 1 m, midabkuna sidoo kale waa kala duwan yahay: buluug, jaalle, buluug, cad, casaan. Anemone ayaa muddo dheer la ogaaday sifooyinkiisa bogsashada, taas oo ay ugu mahadcelisay taas oo loo isticmaalay daawada dhaqanka.
Grapeerie guduud waa daa'in ah, gaarey height ah laba mitir, iyada oo nidaam xidid si fiican u horumarsan iyo stem a qaro weyn. Waraaqo cuncun leh oo la jajabiyey oo la jeexjeexay iyo cagaar buluug ah oo cagaar ah. Ubax yar yar tuubo, waxay ku soo urureen barbaro barar ah. Duufaannada waawayn ee waaweyn waxay kuusocdaan cadaan, casaan, buluug, casaan ah.
Sida loola tacaalo cayayaanka iyo cudurrada celery-ka
Bannaanka u badan iyo bannaanka u aaminsan yihiin in dalagga iyo cagaarka cagaaran uma baahna daryeel gaar ah - waxaa lagama maarmaan ah in lagu beero abuurka iyo beergooyska ayaa iska soo baxaya. Si kastaba ha ahaatee, labada dill, karootada, iyo celery waxay saameynayaan cudurada iyo cayayaanka. Marka la ogaado caleemaha yellowed, ha ku degdegin in ay ka soo baxaan gabagabada, si fiican u fiirso calaamadaha iyo go'aaminta sababta.
Xeerarka xanaanada iyo dhirta
Qeybo badan oo ubax ah, cawska caleenta badan ayaa soo jiidanaya dareenka, wax u eg caleenta caleemaha cawska leh burushyada qulqulka leh jaale ama caddaan, mararka qaarkood ubaxyo casaan ah. Cawska waa sawirqaade. Waxay ku dhacdey jacayl badan oo ubaxlayaasha ah iyo bannaanka si ay u daryeelaan aan qabyo ahayn iyo ubax dheer oo badan.
Lupins koraya: oo dhan oo ku saabsan daryeelka iyo beeritaanka
In kasta oo xaqiiqda ah in inta badan la tixgeliyo lupins ah ubaxyada duurjoogta ah oo u maleynaya in ay adag tahay in la beero iyo daryeelka ubaxyada xaaladaha beerta, dhirta kuwan ayaa sii kordhaya caan ka mid ah beerta. Lupine waa xubin ka mid ah qoyska legume, oo leh nidaam asaas ah oo asal ah.
10 noocyada ugu caansan ee lupins
Lupine waa dhirta sanadlaha ah ama gaaban. Waxaa jira noocyo noocan oo kale ah - cawska, geedo yar yar iyo xoortay. Lupins dhuleed waa Ameerika iyo Mediterranean. Nidaamka asaasiga ah ee midabadani waa mid muhiim ah, xididka ugu weyn wuxuu noqon karaa ilaa laba mitir dheer. Waxay ubaxu ku jirtaa inflorescence qaabka burushka ugu sareeya ee ka soo baxa ubaxyada zygomorphic ee midabyo kala duwan.
Buzulnik: sharaxa, noocyada ugu fiican iyo noocyada
Haddii aad jeceshahay "sunny" qorraxda, waxaad jeceshahay ubaxyo dhaadheer oo caato ah, ka dibna waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa buzulnik (ligularia). Ubax Tani waa qadarin by bannaanka u for iyada qurxin iyo ubax qurux badan. Warshadu waxay u kori kartaa dhererka laba mitir iyo mid kasta oo isku dhejis ah si loo helo wax badan oo ubaxyo isku mid ah oo dab ah.
Talooyinka ugu sarreeya ee ku saabsan koriinka sabiibta ee ku yaala goobta
Oriental orange-ka yar ama dhicin - dhirta cawska ah, sii kordhaya cawska, buuraha buuraha iyo meelaha kaynta. Noocyo firfircoon ayaa la sameeyay tan iyo dhamaadkii qarnigii 19aad si ay u koraan ubaxa sida warshad ornamental ah. Tilmaamaha Bariga Bariiska ee Bariga Bariga ah waxay leeyihiin qaro weyn, toosan oo leh tiro yar oo caleemo ah.
Beerto habboon iyo qarsoodi ah beerashada
Mid ka mid ah dugsiyada Ruushka, ardayda waxaa la weydiiyey waxa ash ash buur ah oo loo bixiyay seddex siyaabood oo kala duwan: shimbir shimbir ah; xayiraad ka kooban geedo jiifa; geedaha reerka Rosaceae. Carruur badan ayaa waydiistay in ay ka caawiyaan golaha. Xaqiiqda, Rowanberry (Magaca Laatiinka Sorbaria, oo laga soo qaado sorbus waa ash buur) ma aha shimbir ama geed, laakiin godka 2-3 m ee dhererka, habka ugu weyn ee Aasiya, iyo sidoo kale Siberia iyo Bariga Fog.
Noocyada Hortensia argagaxa leh
Hydrangea waa dhir geed oo ka tirsan hiddaha Hydanganiyanka (Hydrangeaceae). Waa daneyneysaa beeralayda ubax sababtoo ah geedka jilicsan ee ubaxyada leh ubaxyo badan oo kala duwan: midab, buluug, casaan, buluug. Homeland hydrangeas - Shiinaha iyo Koonfur Bari Asia. Warshadda waxaa lagu soo bandhigay dhaqameed dhamaadkii qarnigii 18aad.
Sharaxaada noocyada iyo noocyada caanka ah ee lobelia (sawir leh)
Lobelia - waa geed beerta qurxoon oo leh daruur cufan oo ubax yar yar. Beerta waxaa lagu qurxiyey ubaxoodii jilicsanaa laga bilaabo May ilaa September. Lobelia waxay u muuqataa mid aad u fiican oo lagu dabbaalan karo dhirta iyo ubaxyada, iyo beeraha dalagyada ubaxyada. Marka aad diyaarinayso ubax, waxaad isticmaali kartaa oo isku daraysaa noocyo kaladuwan oo kala duwan iyo midabyo lafdhabarta ah ama hoos u dhigo quruxda jilicsan ee lobelia leh midabyo kale oo lagu qurxiyo.
Daryeelka karantiilka ee guriga ee raaxo iyo aqoonta arinta
Kaararku waa caan ka mid ah dhirta qashinka ah ee sanadlaha ama qashinka ah iyo subshrubs ka tirsan qoyska Kutrovye. Cudurka waxaa ku jira siddeed nooc, meesha uu ku dhashay todobo ka mid ah - Madagascar, iyo hal - India iyo Sri Lanka. Naqshadeynta muuqaalka waxay isticmaashaa karantaha casaan - nus jeex ah oo ah 40-50 cm, oo leh caleemo cufan iyo cufan, caleemo madow oo cagaar ah iyo ubaxyo akril.
Wax kasta oo ku saabsan datura sii kordhaya (cawska cagaarka) beerta ubaxaaga
Datura ama datura-caws waa ubax aan caadi aheyn oo qurux badan oo badanaa laga helaa ubaxyada iyo sawirrada shakhsi ahaaneed. Datura gabi ahaanba lama qabin, beerashada iyo daryeelka ay ku saleysan tahay aqoonta fudud, sidaas darteed, haddii la doonayo, ubaxa si fudud ayaa loo kobcin karaa, sida cadeeyay sawirro badan oo ah beeraha ubaxa.
Qeexida iyo sawirka noocyada ugu wayn ee cowska
Wixii la jecel yahay shimbiraha dabiiciga ah, mid ka mid ah calaamadaha ugu wanaagsan ee uu ka mid yahay safka cagaarka, noocyada noocyada kala duwan ee kuwaas oo bixiya qabanqaabiyeyaasha beerta beerta leh qol loogu talagalay hal-abuurka. Jardiinooyinka iyo goobaha iskuulada, goobaha iskuulada ee dhamaan heerarka kala duwan iyo shirkadaha wax-soo-saarka, barxadaha iyo goobaha beerta ayaa sii kordhaya oo lagu qurxiyo duurka geedaha, caabbinta kulaylka, iska caabinta jiilaalka, iska caabinta cudurada iyo iswaafajinta gaarka ah ee xaalad kasta waa mid aad u qiimeeya.
Liistada noocyada kala duwan
Sundew - warshad khatar ah oo cayayaanka ah, oo loo yaqaan "Killer". Tani waa cawska qallalan ee cawska oo leh caleemo qulqulaya oo laga soo ururiyey xididada rosette qaro weyn. Xagga geesaha iyo dusha sare ee caleemaha qorraxdu waa ciddiyo waaweyn, timo qanjir ah, taataabooyin, taasoo, marka la taabto, la xakameynayo iyo xabsi macaan leh oo xaraar leh si ay u qabtaan cayayaanka.
Waa maxay farqiga u dhexeeya xabaalaha iyo celery sida loo kala saaro dhirta
Marka la eego geedi socodka korriinka la xidhiidha sida laaluush iyo celery, waxaa jiri kara dakhliyo marka ay jirto dareen ah in ay yihiin hal iyo mid isku mid ah. Iyaga oo aan shaki ku jirin, weli way ka duwan yihiin xitaa muuqaalka. Waa muhiim! Caddaynta in jecel yahay waa celery waa khalad - waxay yihiin qoysaska si gaar ah botanical.
Brachychiton: daryeelka guriga
Sida loo helo geedo basil ah? Xeerarka daryeelka ee sprouts iyo bannaanka u taliya
Kaliya aad u xiiso badan oo ku saabsan lo'da
Waa maxay kaadisku waa inuu leeyahay bakayle?
Iyada oo la ixtiraamo xitaa dhul yar oo dhul ah, waxaan rabaa in aan ku beero waxyaabo ku dul mari doona miro ama uun uun isha ku hay. Laakiin marar badan bannaanka iyo bannaanka u ma ka fikiraan wax badan oo ku saabsan design of sariiraha. Taasna waa sababta deyrka sariiraha looga samaysan yahay qalab aan habooneyn waxayna u muuqdaan kuwo aan la qabin. Read More
Noocyo aan shaki lahayn oo lo'da ah